श्रीमानको कुटाईवाट घाईते अप्सारा न्यायको खोजिमा – ekarnalikhabar
श्रीमानको कुटाईवाट घाईते अप्सारा न्यायको खोजिमा
१४ मंसिर २०७७, आईतवार ०२:२९
कालिकोट- शुक्रबार देशभरका अधिकारकर्मीहरु १६ दिने लैगिक हिंसा बिरुद्धको अभियानका बिभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर ठुलठुला कुरा गर्देै थिए र भन्दै थिए लैगिक हिंसाबाट सबै भन्दा बढि बालबालिका र महिला पिडित छन ।
नभन्दै कालीकोटको रास्कोट नगरपालीका वडा नं ९ की अप्पसरा तिरुवा हिन्सामा पर्नु भएको छ । अप्सरा आफ्नै श्रीमान डब्वले तिरुवाको कुटाइबाट घाइते हुनु भएको छ । अप्सरा संगै उहाँका नावालक छोरा पनि निर्धात आफ्नै बाबुबाट कुटिएका छन । आफ्नै वुवाको कुटाईवाट अप्सराको आँखा सुनिएको छ भने शरिरभरी निलडाम छन ।
नावालक छोराको पुरै मुख आँखामा निलडाम रहेका छन । अप्सरा ८ महिनाकी गर्भवति समेत रहेकी छन । उहाँका श्रीमानले उहाँलाइ कुट्न लागेको बर्षौ बिति सकेको छ । अप्सराले श्रीमानको यस्तो हिंसा त कति दिन खेप्नु भयो भयो, बयान गर्न सक्ने अबस्था छैन । किन कुट्छ भन्दा मदिरा सेवन गरेर आउने कुट्ने गालि ब्यइजेत गर्ने गरेको पिडित अप्सराको गुनासो छ ।
अप्सरावाट दुई बालबच्चा छन अर्को अप्सराको पेटमा डब्बलेको ८ महीनाको गर्भ छ । घरमा श्रीमानबाट निर्धात कुटिए पछि साहारा लिन शुक्रबार वडा नं ८ माइतिघरमा पुगेकी छन । पेटमा आठ महिनाको बच्चा छ तिन दिन देखि खाना समेत खान पनि नदीएको उनको गुनासो छ ।
श्रीमान डब्बलेले यसरी घरेलु ंिहंसा गरेर श्रीमतीलाइ मरणासन्न हुने गरि निर्घात कुटपीट गर्दा अधिकारकर्मीको लैंगिक हिंसा बिरुद्धको अभियानले गिज्याइ रहेको छ । बारम्बार घरेलु हिंसामा पर्दै आएकी अप्सराको गाउँमा दलित अधिकार कर्मी छैनन होलाकी महिला अधिकार कर्मी त्यहाँ कि सरकार छैन ? वा गृह प्रशासन कि कानुननै ? तिन तिन दिन भोकभोकै कुटिदा सबै निकायको नजर त्यहाँ किन पुग्न नसकेको होला ? यो सोचनीय बिषय बनेको छ ।
र्मातीको साहरामा न्याय खोज्दै रास्कोट नगरपालिका , आरसीपी बजार पुगेर न्यायीक समितिका संयोजक उप प्रमुख मिसरा बमसंग सम्पर्क भएको पाईएको छ । श्रीमानको कुटाइ बाट थिलोथिलो भएको ज्यान र शरिरै भरीका निलडामको उपचार समेत उपप्रमुख मिमसराको सहयोगमा भईरहेको एक श्रोतले वताएको छ ।
उपचारसंगै प्रह्री चौकीमा छलफल भएको र आव कानुनी प्रक्रिया सुरु भएको रास्कोट नगरपालिका उपप्रमुख मिमसरा बम शाहीले वताउनुभयो । १६ दिने लैगिक हिन्सा बिरुद्धको अभियानले यी यस्ता महिलाको पिडालाइ छुनु पर्ने हो । अधिकारका कुरा रटान गरेर नथाक्ने दलित अधिकारकर्मी र महिला अधिकारकर्मीले यी यस्ता महिलाहरुको अधिकारका लागी कहि कतै पनि कुरा उठाएको आज सम्म पाईएको छैन ।